I-Intel Iqalisa i-Xeon Scalable Processor Yezikhungo Zedatha | Kusuka kuLinux
Kumenyezelwe eminyakeni embalwa eyedlule, Ekugcineni i-Intel yethule i-Ice Lake, iprosesa yayo yesikali sesithathu esine-10-nanometer yesizukulwane sesithathu i-XeonUkunikela ngama-cores angama-40 ngesokhethi ngayinye, kwakha isisekelo seplatifomu yesikhungo sedatha ye-Intel.
I-Intel ithi bonke abahlinzeki bezinsizakalo zefu abaphambili bazohlinzeka ngezinsizakalo ezizinze e-Ice Lake. Ngokwethulwa kwale chip, abakhiqizi bemishini abangaphezu kwama-50 sebevele bakhe ngaphezu kwamaseva we-250 ngokuya ngale nkundla. Idizayinelwe ukulayishwa komsebenzi okuba nezimakethe ezahlukahlukene (ifu, inethiwekhi, njll.).
Lo mugqa omusha wesizukulwane sesithathu sama-processor we-Ice Lake Xeon, ngokususelwa kunqubo yawo ye-10nm unezinhlamvu ezingama-40 futhi zenzelwe amasistimu amasokhethi awodwa nangamabili kuphela, ancintisana emakethe lapho kutholakala khona ezinye izinketho ze-x86 ne-Arm.
Eqinisweni, lokhu kukhululwa kuza ngesikhathi esibucayiNjengoba imakethe yesikhungo sedatha iya ngokuya incintisana, i-AMD ibheka isabelo semakethe esimangazayo se-Intel, ngenkathi amakhasimende e-Intel akha ama-chips awo.
Okwamanje, ngemuva kokubambezeleka okuningana Kumephu yomgwaqo wayo womkhiqizo, i-CEO uPat Gelsinger, owathatha le nkampani ngoJanuwari, uqashe i-Intel "kwi-cadence engaguquki yemikhiqizo enqenqemeni" isebenzisa kokubili ukukhiqiza kwayo nokwangaphandle kokukhiqiza.
Ngalesi sizukulwane esisha sama-Xeon processor (i-ICX noma i-ICL-SP), ukunikezwa kwe-Intel kunezinhloso ezimbili ezithile: okokuqala, ukuguqulwa kwesizukulwane kuqhathaniswa nesizukulwane sesibili, kepha futhi nokuthengiswa kwesisombululo esikhundleni seprosesa elula.
"Ipulatifomu yesizukulwane sesithathu iXeon iyona evumelana nezimo futhi esebenza kahle kakhulu emlandweni wethu," kusho uNavin Shenoy, iphini likamongameli omkhulu kanye nemenenja jikelele ye-Intel's Data Platforms Group, esitatimendeni ngoLwesibili. Lesi sizukulwane seXeon Scalable, esokuqala se-Intel ku-10nm, sisebenzisa ukwakhiwa okusha, umnyombo weSunny Cove. Ngokuya nge-Intel, izinzuzo zeSunny Cove ziqala ngokunyuka okungu-20% kokusebenza okuluhlaza, ngenxa yengqikithi enkulu kakhulu enezinsiza ezingaphambili nezithuthukisiwe zesikhathi sokusebenza.
Ngokuphathelene nezici nokucaciswa kweprosesa entsha:
Ipulatifomu isekela kuze kufike kuma-terabyte ayisithupha enkumbulo yohlelo ngesokhethi ngayinye, kuze kube yiziteshi eziyisishiyagalombili zememori ye-DDR4-3200 ngesokhethi ngayinye, kuze kufike emizileni engu-64 ye-PCIe Gen4 ngesokhethi ngayinye.
I-bandwidth yememori ithuthukiswa ngokwandisa iziteshi zememori kusuka kweziyisithupha kuya kweziyisishiyagalombili, kepha futhi ngamasu amasha wememori yangaphambi kokutakula kanye nokwenza ngcono okwandisa umkhawulokudonsa kuze kufike ku-100% wokusebenza ngokusebenza kahle okungeziwe okungaphezu kwama-25%.
Ukuxhumeka kwe-mesh phakathi kwama-cores nakho kusebenzisa ama-algorithms abuyekeziwe ukondla i-I / O kuye nangokusuka kuzinhlamvu. Ngokwengeziwe, i-Intel ikhuthaza ukuphathwa kwamandla okungcono ngokusebenzisa ama-ejenti wokulawula amandla azimele ngaphakathi kwebhulokhi ngayinye ye-IP.
Ngaphandle kwalokho, I-Intel ingeza izici zokusheshisa, isho ukuthi ngaphezu kokusebenza okuluhlaza, isoftware elungiselelwe lawa ma-accelerator izohlomula ngokuthuthuka okukhulu kunesizukulwane esedlule. Iqala ngokwakhiwa okuyisisekelo kernel, ikakhulukazi uma kukhulunywa ngemiyalo ye-SIMD efana ne-SSSE, AVX, AVX2, ne-AVX-512. I-Intel inika amandla ukusekelwa okungcono kokubethela nge-ISA yayo, ivumela i-AES, SHA, GFNI, kanye neminye imiyalo ukuthi isebenze ngasikhathi sinye kuwo wonke amasethi wemiyalo ye-vector.
Ngokusho kwe-Intel, u-AI-VX-512 ithuthukisa amaza ngesikhathi sokusebenza okuyinkimbinkimbi kanambambili kwe-ICX ngemephu ehlakaniphile kakhulu phakathi kwemiyalo nokusetshenziswa kwamandla, ukuhlinzeka ngemvamisa engu-10% ngaphezulu kuyo yonke imiyalo engama-256-bit. Kungezwe kulokhu ubuchwepheshe bokukhethwa kwejubane kwe-Intel njengePhrofayili Yokusebenza, Izithuthukisi ze-Base Frequency, i-Turbo Frequency Enhancements, kanye ne-Core Power Support yokuqinisekisa ukusebenza okuphezulu ngqangi ngayinye noma insizakalo yekhwalithi ngesikhathi sokusebenza. Ukusetshenziswa kakhulu kohlelo, ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Ezinye izici ezintsha zifaka phakathi Isandiso Sokuvikela Isoftware, ukuthi ivumela usayizi we-enclave ufike ku-512GB isokhethi kwamanye amamodeli.
"I-Intel ibekwe ngokukhethekile ekwakhiweni kwezakhiwo, ukuklama nokukhiqiza ukuze inikeze izixazululo ze-silicon nezixazululo ezihlakaniphile amakhasimende ethu azifunayo," kusho uShenoy. Ekugcineni, i-Intel ichaza ukuthi uma kuqhathaniswa nesizukulwane esedlule, i-Ice Lake inikeza ukwanda okuphakathi kwe-46% ekusebenzeni kwemithwalo yemisebenzi edumile yedatha yedatha. Kufaka phakathi i-Intel DL Boost yokusheshisa kwe-AI.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » I-Intel yethula iprosesa le-Xeon elingenakulinganiswa lezikhungo zedatha